Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa bajata bara 2012 raggaasise - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Office of the Prime Minister of Ethioipia
Manni maree bakka bu'oota uummataa wixinee bajata bara 2012 (A.L.I) irratti erga mari'ateen booda birrii biiliyoona 386.95 bajata mootummaa Federaalaa bara 2012 gochuun sagalee guutuun raggaasiseera.
Bajata bara 2012 keessaa dhibbeentaan 60 hojiilee hiyyummaa hir'isanif ramadame.
Bara bajataa kanatti lammiileen miiliyoona sadiif carraa hojii uumuuf karoorfatamuu MM Abiy Ahimad himaniiru.
Bajata ramadame keessaa birriin biiliyoona 109 baasii idilee mootummaa federaalaaf, baasii kaapitaalaaf birrii biiliyoona 130, deeggarsa naannoleef birrii biiliyoona 140 akkasumas hojii galmoota misoomaa itti fufsiisuuf birrii biiliyoona jaha ramadeera.
Bajatni kun guddina diinagdee biyyatiin bara 2012ti ni galmeesisti jedhamee eeggamu dhibbeentaa 9.2 ilaalcha keessa galchuun akka ramadame himameera.
Mootummaan diyaasporaa haasaa jibbaa tamsaasan attamii gaafachu danda'a?
Ajjeechaan tibbanaa rifoormii Itoophiyaa gufachiisaa?
Ministirri Mummee Abiy Ahimad gaaffiiwwan miseensota mana marichaan dhiyaateefis deebii kennaniiru.
Qaala'iinsi gatii dhimma lammiilee harka qalleeyyii yaaddessaa jiru akka ta'eefi mootummaan qaala'iinsa gatii hir'isuu irratti xiyyeeffatee akka hojjetu himaniiru.
Qaala'iinsa gatii mul'atuuf walsimuu dhiisuun dhiyeessii fi fedhii sababa ijoo akka ta'e kan himan MM Abiy diinagdee fedhii irratti hundaa'e gara diinagdee dhiyeessii irratti hundaa'eetti jijjiiruuf ni hojjetama jedhan.
Kana malees daballii gatii kiraa manaa to'achuufis ni hojjetama jedhan.
Dhimma dargaggootaan walqabatee bara bajataa 2012ti lammiileen miiliyoona sadi hojii akka argataniif karoorfatameera.
Lammiilee biyyattii hojiitti bobbaasufis biyyaalee Awuroopaa, Eeshiyaa fi baha giddu galeessaa walin mari'atamaa akka jiru MM Abiy Ahimad himaniiru.
Haaluma kanaan bara 2012tti lammiileen 50,000 Yunaayitid Arab Imireetis UAE keessatti carraa hojii akka argatan ni taasifama jedhan.
Dabalataan dargaggootni pirojeektota biyyattii keessatti hojjetaman irratti akka hirmaatan fi dargaggoota kalaqtoota jajjabeessuun carraa hojii dargaggootaa guddisuuf akka hojjetamus himaniiru.
Hammeentaa hojii dhabdummaa gara dhibbeentaa kudhanii gaditti hir'isuun yaada mootummaa isaanii akka ta'e kan himan MM Abiy Ahimad gama hoji dhabdummaa hir'isuutin jijjiirama qabatamaa akka fidanis abdii qaban himaniiru.
Waa'ee Bulchiinsa QabeenyaaQisaasa qabeenyaa ilaalchisee hanna gama angawoota mootummaan jiru ciminaan akka to'atan himan.
Kana malees bittaa fi dhabamsiisa qabeenyaa irratti rakkoon guddaan akka jiru kan himan Ministirri Mummee Abiy Ahimad meeshaalee manneen kuusaa keessa tuulamanii taa'an tajaajila biroof akka oolan gochuuf ni hojjetamas jedhan.
Galii fi liqaa
Bara 2011 hanga guyyaa kaleessaatti galii birrii biiliyoona 197.2 walitti akka qabame fi kan bara darberra caalmaa dhibbeentaa kudha lamaa akka qabus kan dubbatan MM Abiy abbootii qabeenyaa gibira irraa eeggamu haalaan kaffalan akka badhaafaman himan.
Itoophiyaan yeroo ammaatti liqaa oomisha waliigalaashee keessaa dhibbeentaa soddoma ta'u akka irra jiru fi mootummaan liqaa daldalaa biyyattiin liqeeffattee turte gara liqaa yeroo dheeraa keessa deebi'utti akka jijjiiramuuf hojjechaa turuusaas himaniiru.
Akka fakkeenyaattis dhala liqaa doolaara miiliyoona 400 waggaa waggaan biyya Chaayinaaf kaffalamuu qabu hambisuun danda'amuusaa dubbatan.